Ritalin vs. Adderall: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य चेकआउट कल्याण खेलहरु औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी प्रेस
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Ritalin vs. Adderall: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Ritalin (methylphenidate) र Adderall (एम्फेटामिन / dextroamphetamine) एडीएचडी वा ध्यान घाटा hyperactivity अवरोधको उपचार गर्न प्रयोग गरिने दुई भन्दा धेरै सामान्य उत्तेजक औषधिहरू हुन्। कहिलेकाँही, व्यवहार थेरापी ADHD को उपचार गर्न मद्दत गर्न पर्याप्त हुन सक्छ। धेरै जसो केसहरूमा, तथापि, Ritalin वा Adderall जस्ता औषधीहरूको साथ उपचार आवश्यक छ।
उत्तेजक औषधीहरूले मस्तिष्कमा केही न्यूरोट्रान्समिटरको पुनःअपटेक ब्लक गरेर काम गर्दछ। वास्तवमा, यी औषधिहरूले फोकस र सतर्कता सुधार गर्न मद्दत गर्न नोरपिनेफ्रिन र डोपामाइनको गतिविधि बढाउन मद्दत गर्दछ। Ritalin र Adderall ले पनि माइनकोलेप्सीका मानिसहरुमा जागृति सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
जे होस् Ritalin र Adderall समान तरिकाले काम गर्दछ, तिनीहरूसँग खुराक र योगनहरू छन्। तिनीहरूसँग कति फरक छिटो काम गर्दछन् र तिनीहरूको प्रभावहरू कति लामो हुन्छ भन्नेमा पनि फरक छ।
Ritalin र Adderall बीच मुख्य फरक के हो?
Ritalin र Adderall बीच मुख्य भिन्नता तिनीहरूका मुख्य सामग्रीहरूमा हो। Ritalin methylphenidate हाइड्रोक्लोराइड हुन्छ र Adderall एम्फेटामाइन र dextroamphetamine को एक संयोजन हुन्छ।
रिटेलिन एक छोटो अभिनय गर्ने औषधि हो जुन शरीरमा चरम तहमा पुग्छ र थोरै समयमा एडडेरालको तुलनामा। Ritalin १ घण्टा भित्र चरम तहमा पुग्न सक्दछ जबकि Adderall levels घण्टा प्रशासन पछि peak घण्टा सम्म पुग्छ। यस तरिकाले, Ritalin Adderall भन्दा छिटो काम सुरू गर्दछ।
यसको विपरित, Adderall सामान्यतया Ritalin भन्दा लामो शरीर मा रहन्छ। औसत आधा जीवन १० देखि १ hours घण्टा एडेलरल र to देखि hours घण्टा रिटेलिनको लागि हो। Ritalin को एक लामो-अभिनय फार्म, Ritalin LA, पनि उपलब्ध छ र लगभग hours घण्टा लामो हुन्छ।
Ritalin र Adderall बीच मुख्य भिन्नता
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट र विस्तारित रिलिज ट्याब्लेट मौखिक ट्याब्लेट र
मानक खुराक के हो? २० देखि mg० मिलीग्राम, एक डाक्टरले निर्देशन गरे अनुसार दैनिक दुई वा तीन पटक बिहान एक पटक to देखि mg० मिलीग्राम र डाक्टरले निर्देशन गरे अनुसार प्रत्येक to देखि hours घण्टा
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधि वा लामो अवधि का उपयोग तपाईको डाक्टरको पर्चेमा निर्भर रहन उचित हुन सक्छ छोटो अवधि वा लामो अवधि का उपयोग तपाईको डाक्टरको पर्चेमा निर्भर रहन उचित हुन सक्छ
शर्तहरु Ritalin र Adderall द्वारा उपचार
यदि तपाईं वा तपाईंको बच्चा निदान गरिएको छ भने एडीएचडी , Ritalin वा Adderall जस्तै केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उत्तेजक निर्धारित गर्न सकिन्छ। Ritalin र Adderall दुबै एफडीए-अनुमोदित हो ADHD लक्षणहरू जस्तै बेवास्ता, आवेग र बेचैनीको उपचार गर्न। दुबै औषधिहरू नार्कोलेप्सीको उपचार गर्नको लागि पनि एफडीए-अनुमोदित हुन्छन्, एक निद्रा विकार जुन दिनको तन्द्रा र निन्द्राको लागि अत्यधिक आवश्यकताले देखाउँदछ।
Ritalin र Adderall को अफ-लेबल प्रयोग अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या जस्तै उदासीन वा चिन्ता, विशेष गरी ADHD भएका बिरामीहरूमा उपचार समावेश गर्दछ। यी उत्तेजकहरू बाइपलर डिसअर्डरको उपचारको लागि अध्ययन गरिएको छ। एक साहित्य समीक्षा द सीएनएस उत्तेजकहरूलाई द्विध्रुवी विकारको लागि सम्भावित उपचार विकल्प ठान्दछन् यद्यपि उनीहरूको प्रभावकारिताको अझै अध्ययन भइरहेको छ।
घरेलु उपचार uti बाट छुटकारा पाउन
Ritalin र Adderall को लागी अन्य अस्वीकृत प्रयोगहरू समावेश गर्दछ तौल घट्नु उपचार र संज्ञानात्मक कार्यहरूको बृद्धि, जस्तै सिक्ने र मेमोरी। यी अनुमोदन नभएका प्रयोगहरूले केही व्यक्तिहरूमा लागूपदार्थको दुरुपयोग वा दुरुपयोग निम्त्याउन सक्छ। अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि एडीएचडी बिना ती यी उत्तेजकहरू हुन् संज्ञानात्मक कार्यहरू सुधार नगर्नुहोस् । यसको सट्टामा, ती वास्तविकतामा नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ।
सर्त Ritalin Adderall
ध्यान घाटा hyperactivity डिसअर्डर (ADHD) हो हो
Narcolepsy हो हो
डिप्रेसन अफ-लेबल अफ-लेबल
चिन्ता अफ-लेबल अफ-लेबल
Ritalin वा Adderall अधिक प्रभावी छ?
Ritalin र Adderall दुबै हो प्रभावकारी औषधिहरू ADHD र narcolepsy को उपचार गर्न। तपाईंको शरीरले ड्रगमा कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ भन्नेमा निर्भर गर्दै एक विकल्पले राम्रोसँग काम गर्न सक्दछ। चाहे तपाईं तत्काल रिलीज वा विस्तारित-रिलीज फॉर्मूलेसन पनि असर गर्न सक्छ एक औषधी तपाईंको लागि राम्रो काम गर्दछ।
एक अनुसार मेटा-विश्लेषण जसमा १33 क्लिनिकल परीक्षणहरू थिए, मेथिलफिनिडेट एडीएचडीका साथ बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा पहिलो-लाइन औषधीको रूपमा बढी प्रभावकारी छ। को लागी वयस्क एडीएचडी , Adderall प्राथमिक उपचार विकल्प हुन सक्छ। यस विश्लेषणले अन्य उपचार विकल्पहरू जस्तै तुलना गर्दछ Strattera (atomoxetine), Provigil (modafinil), र वेलबुट्रिन (bupropion)।
अन्य अध्ययनहरूले यो पनि फेला पारेका छन कि एडटलरले तुरुन्त रिलीज राइटेलिन भन्दा बढी फाइदा लिन सक्छ। अघिल्लो मेटा-विश्लेषणको आधारमा, एडेलरल एकसँग प्रभावकारितामा Ritalin सँग तुलना गर्न सकिन्छ लामो अवधि कार्य को।
एडीएचडीको उपचार संकेत र लक्षणहरूको आधारमा व्यक्तिगिकरण गरिएको छ। तपाईं वा तपाईंको बच्चाको लागि उत्तम विकल्पहरू पत्ता लगाउन तपाईंको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्। उपचार विकल्पहरूमा सम्भावित ब्यवहारिक उपचार र औषधिको संयोजन समावेश हुन्छ।
कभरेज र लागत तुलना RETALIN विरुद्ध बनाम Adderall
धेरै मेडिकेयर र बीमा योजना Ritalin को सामान्य संस्करण कभर हुनेछ। रिटेलिनको औसत खुद्रा लागत १०० डलरको नजिक छ। पूर्ण खुद्रा लागत तिर्नुको सट्टा, एकलकेयरले एक छुट कार्ड प्रदान गर्दछ जुन जेनेरिक रतालिनको नगद मूल्य घटाउन सक्छ $ २१ मा तपाईं कुन फार्मेसी प्रयोग गर्नुहुन्छ।
सामान्य रूपमा प्रायः चिकित्सा र बीमा योजनाहरू द्वारा कभर गरिन्छ जब यो जेनेरिकको रूपमा तोकिन्छ। केहि योजनाहरु मा ब्रान्ड नाम औषधि कभर छैन यदि एक कम लागत को जेनेरिक उपलब्ध छ। Adderall को औसत खुद्रा मूल्य सामान्यतया $ 500 भन्दा बढी छ। तपाईं एकलकेयर बचत कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जेनेरिक एडडेलर खरीद गर्न as as as भन्दा कममा।
मानक खुराक २० मिलीग्राम, tablets० ट्याब्लेटको मात्रा Mg० मिलीग्राम, tablets० ट्याब्लेटको मात्रा
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे । 3– $ 69 $ 7– $ 78
एकलकेयर लागत $ २१ $ 35
Ritalin vs Adderall को सामान्य साइड इफेक्टहरू
रिटेलिनको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू भनेको टाउको दुख्ने, अनिद्रा वा समस्या निद्रा, चिन्ता, पसिना बढेको, बढेको मुटुको दर (ट्याचिर्डिया), मुटुको धड्कन, सुख्खा मुख, र मतली हो।
एड्रेरल लिने व्यक्तिहरूले साइड इफेक्ट अनुभव गर्न सक्दछन् जसमा टाउको दुख्ने, अनिद्रा, सुख्खा मुख, घबराहट वा चिन्ता, बढेको मुटुको दर, र मतली हो।
दुबै Ritalin र Adderall पेट वा पेट दुखाई साथै कम भोक को कारण हुन सक्छ। भोक कम भयो भने प्राय: केही व्यक्तिहरूका लागि तौल घटाउन सक्छ।
अधिक गम्भीर दुष्प्रभाव दुर्लभ हो र सामान्यतया यो औषधि सामान्य भन्दा अधिक मात्रामा लिईन्छ जब देखा पर्दछ। यदि यी साइड इफेक्टहरू समयसँगसँगै बिग्रन्छ भने, चिकित्सा सल्लाहको लागि डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
अनिद्रा हो * हो *
बढेको मुटुको दर हो * हो *
चिन्ता हो * हो *
पसिना बढेको हो * हो *
भोक कम गर्नु हो * हो *
पेट दर्द हो * हो *
स्रोत: डेलीमेड ( Ritalin ), डेलीमेड ( Adderall )
Ritalin र Adderall को ड्रग अन्तरक्रिया
Ritalin र Adderall उस्तै केही औषधीहरूको साथ कुराकानी गर्न सक्छन्। यी औषधीहरूले मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटरहरू (MAOIs), एन्टिहाइपरटेन्सेभ्स, र एनेस्थेटिक्स समावेश गर्दछ। Ritalin वा Adderall को साथ यी ड्रग्स सेवन गर्दा रक्तचाप वा हृदय गति मा परिवर्तन को रूप मा हृदय प्रभाव को जोखिम को वृद्धि गर्न सक्छ।
रिटालिन र एडेलरलले पनि सेरोटोनर्जिक ड्रगहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ, धेरै सहित antidepressants जस्तै फ्लुओक्सेटिन र प्यारोक्सेटाइन। यी औषधिहरू सँगै लिँदा सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको खतरा बढ्न सक्छ।
Ritalin को तुलनामा, Adderall सम्भावित बढी औषधि संग कुराकानी गर्न सक्छ। Adderall निश्चित द्वारा अधिक भारी प्रोसेस गरिएको छ कलेजो एन्जाइमहरू जस्तो कि CYP2D6 परिवारमा सम्बन्धित छ। यस कारणले गर्दा, Adderall ले CYP2D6 अवरोधकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ, जसले Adderall स्तरहरू बढाउन र प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ।
Adderall पनि एसिडिफाइंग र क्षारीयकरण एजेंटहरूसँग अन्तर्क्रियाको लागि परिचित छ। यी ड्रग्सले असर गर्न सक्दछ कसरी Adderall शरीर मा अवशोषित छ।
औषधि ड्रग क्लास Ritalin Adderall
IsocarboxazidPhenelzine मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) हो हो
डेसफ्लुरान एनेस्थेटिक्स हो हो
सर्टलाइन सेरोटोनर्जिक ड्रग्स हो हो
Atenolol एड्रेनर्जिक ब्लकरहरू हो हो
अमोनियम क्लोराइड एसिडिफाई एजेन्टहरू हैन हो
एसिटाजोलामाइड Alkalinizing एजेन्टहरू हैन हो
रिटोनाभिर CYP2D6 अवरोधकर्ताहरू हैन हो
Ritalin र Adderall को चेतावनी
सीएनएस उत्तेजकहरू जस्तै रिटेलिन र एड्डेलरलले हृदयघात र स्ट्रोक जस्ता हृदय घटनाहरूको एक जोखिम बढाउने रिपोर्ट गरेको छ। मुटु सम्बन्धी समस्याहरूको इतिहास भएका व्यक्तिहरू जस्तै मुटुको अतालता वा कोरोनरी धमनी रोग, सावधानी अपनाउनुहोस् जब यी औषधिहरू लिन्छन्।
Ritalin र Adderall ले रक्तचाप र मुटुको दर बढाउन पनि सक्छ। उच्च रक्तचापका साथ जो रक्तचापको औषधी लिइरहेका छन् उनीहरूलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिनु पर्छ उत्तेजक लिने बेला।
Ritalin र Adderall अनुसूची II नियंत्रित पदार्थहरू छन् DEA अनुसार। यी प्रिस्क्रिप्शन उत्तेजकहरू प्रयोग गर्न सक्दछ पदार्थ दुरुपयोग , र / वा निर्भरता। यी औषधिहरूको अचानक विच्छेदनले फिर्ती लक्षणहरूको जोखिम बढाउन सक्छ। स्वास्थ्य उपचार प्रदायकको सुपरिवेक्षणमा यी औषधीहरू प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
बच्चाहरूमा उत्तेजकको दीर्घकालीन प्रयोगले विकासको दमन गर्न सक्छ। बच्चाहरूको उचाई र तौल उत्तेजकको साथ उपचार भर मा नाप्नु पर्छ।
Ritalin वा Adderall को समयमा प्रयोग गर्नु हुँदैन गर्भावस्था वा स्तनपान।
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू Ritalin बनाम Adderall को बारे मा
Ritalin एक ब्रान्ड नाम औषधि ध्यान घाटा hyperactivity विकार (ADHD) र narcolepsy को उपचार गर्न प्रयोग गरीन्छ। यो ध्यान केन्द्रित र जगाउने सुधार गर्न CNS उत्तेजकको रूपमा काम गर्दछ। Ritalin तत्काल रिलीज (Ritalin) र विस्तारित रिलीज (Ritalin LA, Ritalin SR) योगहरुमा एक सामान्य औषधि को रूप मा उपलब्ध छ।
एडेरालल एक पर्चेको औषधि हो जसले एम्फीटामिन र डेक्स्ट्रोमफेटामिन साल्टको संयोजन समावेश गर्दछ। यो एडीएचडी र मादकोपचार को उपचार को लागी FDA- अनुमोदित छ। Adderall एक तत्काल रिलीज र विस्तारित रिलिज (Adderall XR) ट्याबलेटमा उपलब्ध छ।
Ritalin र Adderall उस्तै हो?
Ritalin र Adderall समान तरिकाले काम गर्दछ तर तिनीहरू समान छैनन्। Ritalin methylphenidate र Adderall एम्फीटामिन / dextroamphetamine समावेश गर्दछ।
Ritalin वा Adderall राम्रो छ?
Ritalin र Adderall दुबै एडीएचडी र narcolepsy को उपचार गर्न प्रभावकारी पर्चेको औषधि हो। अनुसन्धान देखाईएको छ त्यो Ritalin बच्चाहरू र किशोर किशोरीहरूको लागि राम्रो हुन सक्छ जबकि Adderall वयस्कहरूको लागि राम्रो हुन सक्छ। यी विकल्पहरू डाक्टरसँग छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि उपचार तपाईंको समग्र अवस्थामा निर्भर गर्दछ।
के म Ritalin वा Adderall गर्भवती हुँदा प्रयोग गर्न सक्छु?
होइन। Ritalin र Adderall सामान्यतया गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिलाहरूमा सिफारिस गरिदैन। गर्भवती हुँदा उत्तम ADHD उपचार विकल्पहरू पत्ता लगाउन डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
के म Ritalin प्रयोग गर्न सक्छु वा रक्सीको साथ Adderall?
मदिरापान गर्दै Ritalin वा Adderall सँग प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ। रक्सीले उत्तेजकको प्रभावहरूलाई मिश्रित गर्न सक्छ र अप्रत्याशित प्रभावहरू निम्त्याउँदछ। यो उत्तेजकको साथ रक्सी पिउन सिफारिस छैन।
Ritalin Adderall जस्तै महसुस छ?
सीएनएस उत्तेजकको रूपमा, दुबै रिटेलिन र एडडेरालले समान उपचारात्मक प्रभावहरू उत्पादन गर्दछ, जस्तै सतर्कता, जागृति, र बढेको फोकस। अधिक मात्रामा, यी ड्रग्सले उत्साह र बृद्धिको भावना निम्त्याउन सक्छ।
Ritalin मेथिलफेनिडेट, एक उत्तेजक छ कि गति को जस्तै प्रभाव पैदा गर्न सक्छ। स्पीड, तथापि, एम्फेटामाइन्स भनिने औषधिलाई जनाउँछ। मेथाम्फेटामाइन एक सामान्य दुरुपयोग गरिएको औषधि हो जुन गतिको रूपमा उल्लेख छ।
के Ritalin तपाईंलाई खुशी बनाउँछ?
धेरै मानिसहरू जो Ritalin लिन्छन् खुशीको भावना, विशेष गरी मा रिपोर्ट गर्छन् उच्च खुराक । अन्य प्रयोगकर्ताहरूले आत्मविश्वास र प्रेरणाको भावना रिपोर्ट गर्छन्। यसैले Ritalin र अन्य उत्तेजक आदत बन्ने औषधि हुन सक्छ जुन कहिलेकाँही दुरुपयोग हुन्छ।
CrossFit केटीहरु WOD लाई भेट्नुहोस्: कसरत महिला को नाम पछि
ACE अवरोधकर्ताहरूको सूची: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
oxycodone को विभिन्न शक्तिहरु के हुन्
यदि मलाई फ्लू छ भने म के खान सक्छु?
मुटु रोग बाट हरेक बर्ष कति मानिसहरु मर्छन्
अल्प्राजोलम लाई किक लाग्न कति समय लाग्छ?
के तपाइँ meclizine लिँदा रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ?
के डाक्टर म सीधा रोग को लागी देख्नु पर्छ?
सबैभन्दा छिटो तरीका एक खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन